Ogaden News Agency (ONA) – Q3aad – 30kii Sano ee ONLF Halganka u Hanaqaaday Maxaa Inoo Qabsoomay
Q3aad – 30kii Sano ee ONLF Halganka u Hanaqaaday Maxaa Inoo Qabsoomay
Posted by ONA Admin	/ August 11, 2014
Sidaad kusoo marteen Q2aad ee taxanahan, waxaa hubaal ah in maamulkii TPLF ee xukunka la wareegay uusan marnaba ku fikirin in ONLF ay dabaaldag u samayn doonto 30-guuradeeda, iyagoo nool oo wali halgankii wada oon kana bixin dalka. Sababtoo ah miisaanka quwada labada ciidan (ONLF iyo TPLF) iyo waliba xaaladii dalka iyo dadkaba uu ku sugnaa waqtigaa, marka laga fiiriyo dhankaa, ciidan kasta oo doonaya inuu xididada u siibo halganka shacabka Ogadenya wuu ku dagdagi lahaa go’aankaa. Hasa ahaatee marka laga fiiriyo dhanka awooda Ilaahay ee ka jirta marwalba dhanka daalimka ah ee kibir qooqa uu wado iyo dhanka taariikhda shacabka Somaliyeed ee Ogadenya ee gumaysi diidka ah, waxaa u haboonayd ururkii TPLF inuu ka fiirsado go’aankuu qaatay waagaa oo aanu ku dagdagin dagaal inuu la galo shacab xaqiisa daba socda.
Calaakuli xaal; sida laga wada dharagsan yahay, ciidankii Wayaanaha oo markaa isu badalay ciidanka dalka Itobiya oo gacanta kuwada dhigay hubkii ciidankii Dargiga, tirtirayna kacdoonkii Oromada, oo dalka ka wada saaray ururkii Itixaadka oo waqtigaa haystay taageero dawlada Carbeed iyo taageero is-bahaysiga xisbiyadii diiniga ahaa ee Somaliya ka hanaqaadayayaa, wuxuu dagaal gaadma ah kusoo qaaday xafiisyadii iyo fadhiisimadii ONLF. Weerarkaa hadafkiisu wuxuu ahaa in madaxda ururka iyo qof ka dhex muuqda bulshada aanay nolol kaga bixin meelahay joogeen oo la astaameeyay.
Waxaa arimahan ku saabsan dagaalkii ay ku soo qaadeen Wayaanaha magaalada Wardheer oo Gudoomiyihii ururka uu socdaal ku marayay iyo Xaruntii ururka ee Gaari-Go’an si aad ah uga xogwaramay mudane Diirane barnaamijyadii uu kaga xogwarmayay xaaladihii lasoo maray. Waxaa kaloo si fiican uga waramay mudane Ciraaqi kolkuu ka baxay magaalada ciidankuu u tagay intay ahaayeen iyo hubka ay haysteen intuu ahaa. Labadaa barnaamijba hoos ka dhagayso mar labaad.
Waxaa kaloo aan arimahan wax ka weydiiyay mudane Cabdikaafi oo ka mid ah taliyayaasha CWXO, waxaana ka mid ahaa jawaabaha uu iisoo qoray;
” Mahad Allaa iska leh ina waafajiyay jihaadka xaqa ah, kadib hadaan dib u eegno mar xaladihii kala duwanaa ee Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogadenya uu soo maray waxaan filayaa inaad horay qoraalo badan uga samayseen. Horaantii 1994 wakhtigii ay kooxda TPLF jabisay axdigii ku meel gaadhka ahaa, waxay ONLF qaadatay go’aankii ahaa in halgankii dib loo bilaabo oo aan la’is dhiibin. Xiligaa ciidanka ONLF wuxuu koobnaa Xaruntii Dhexe ee Gaari-Go’an iyo gobalada qaarkood. Waxaa soo baxay ciidankii ONLF ee ku sugnaa meelahaa, waxaana loosameeyay dibu habahayn iyo qaabdhismeed ciidan, sidaas ayaana lagu hawlgalay iyadoo ciidaknka, hubka, iyo rasaastuba ay aad u yaraayeen. Waxay ahayd xili adag oo nolol adag lagalay. Dadka ama ciidanka duurka u baxay waxay u badnaayeen dad aan horey nolol miyi usoo marin. Waxaa adkaatay sidii loo fulin lahaa go’aankii jabhada ee ahaa ISKUTASHIGA oo micneedu yahay inay ONLF ku tashato kuna dagaalanto hantida shacabka Ogaadenya haysto, ALLANA aan talo saarano. Waxaa adkaatay sidii shacabkeena looga dhaadhicin lahaa ciidankani isagoon haysan wax lacag ah dawlad caawinaysaana jirin inuu dagaalami karo. Waxaa kale oo shacabka reer Ogadeenya aaminsanaa inaan Itoobiya layska celin karin iyadoon lahaysan taageero dawlad kale , oo waxay soo qaadanayeen hal hayskii Itoobiya ay iyadu hirgashatay ee ahaa inay tahay HAMBASAA AFRIKA (Libaaxyadii Afrika ayaan nahay). Wax yar kadib waxaa dhacday in masuul ONLF katirsan uu ku qudbeeyay xili ciidanka ONLF dagaalo kaga guulasteen ciidanka cadawga oo uu yidhi; “Magacii ahaa HAMBASAA AFRIKA anagaa kadhignay DAWACADII AFRIKA. Marxaladaas bilowga ahayd waxaa wada socday oo hawsha ciidanka kamid ahayd laqabsashada nolosha duurka, abaabulka shacabka, iyo in lawada gaadhsiiyo ciidanka gobalada iyo inla furo dugsiyo tababar oo ciidanka loo furo, in koorsooyin gaara loo furo madaxda ciidanka. Waxaa barbar socday cadawga oo juhdi badan galinayay in uu ka hortago koboca ciidanka ONLF, arintaasoo uu cadawga ku guuldaraystay. Dhawrsano kadib shacabkeena waxaa gashay rajo, cadawgiina waxaa ku kordhay culays ah inaan ciidanka ONLF si fudud looga guulaysan karayn, wuxuuna cadawgu soo qaaday weeraro isagoon waxba lakala hadhin awoodiisii ciidan, hasa ahaatee wax natiijo cadawgu kama gaadhin weeraradaas, waxaana marwalba kor u sii kacayay korodhka ciidanka tiro iyo taya ahaanba iyo mooraalka shacabka Ogadenya oo mar walba isagu latalaabsada guulaha uu CWXO gaadho.”
Waxaa kaloo marxaladihii uu soo maray CWXO si fiican uga warbixiyay mudane M. Shariif oo isagana ka mid ahaa Taliska CWXO oon wax ka weydiinay. Waxaa ka mid ahaa hadaladiisa oon dib idinka maqashiin doono isagoo dhamaystiran;
1. M. Shariif
Waxaad halkaa ka odorosi kartaa in qorshihii loo dajiyay ururka ee ahaa Midnimo iyo Isku-Tashi lagu guulaystay. Waxay ku guuldareysatay Itobiya oo taariikhda ay xusi doontaa inay baabi’iso ururkii ONLF iyo halganka shacabka Ogadenya oo marxaladahaa adag soo maray si aanay waligoodna ugu dabaaldagin sanadguurada asaaska JWXO oo awood ciidan iyo mid bulshaba 1000 jeer uu ka sareeyo heerkuu taagnaa waagaa, iskaba daa sanadguurada 30aad. Waxay taariikhda xusi doontaa in dawladii Itobiya hakin weyday halganka shacabka Somaliyeed ee Ogadenya iyadoo waliba kaashanaysa qaar badan oo dhuuni-qaatayaal ah oo magacya badan huwan, iyadoo kaashanaysa xukuumadaha Geeska Afrika ee ku bahoobay ururkan ay ku shaqaysato Itobiya ee EGAD.
Xaaladda hadda uu marayo halganka ayaan kaga faaloon doonaa Qaybta hadhay.
Mudane Ciraaqi :
Mudane Diirane :